Sidee loo abuuraa trochoid iyada oo loo marayo Photoshop? | Abuurista khadka tooska ah
Sidee loo abuuraa trochoid iyada oo loo marayo Photoshop?
Naqshadeynta naqshadeynta ayaa ka mid ah maadooyinka maadiga ah ee jiraSi kale haddii loo dhigo, waa labadaba xirfad shaqo iyo mid aan xirfad ahayn, iyada oo ay ugu wacan tahay qaabeynta shaqadeeda, waxay maamushaa soo jiidashada tiro badan oo dad ah oo daneynaya in qalabkan noocan ah lagu dhaqmo.
Tirada badan ee goobaha naqshadeynta garaafka ay ku maareyso inay gasho dadaal la'aan badan ayaa laga yaabaa inay tahay sabab kale oo dadka inta badan edbintan ku soo gal. Sidan oo kale, waxaa sidoo kale jira tixgelinno kale oo laga sameyn karo naqshadeynta garaafka iyo sababaha ay suurtogalka u tahay in la fiirsado dad aad u tiro badan oo xiiseynaya inay galaan edbintan.
Tan, malaayiin shirkado adduunka oo dhan ayaa badanaa leh khubaro ku xeel dheer qaabeynta sawirada, kuwaasoo u heellan qaabeynta shaabadda shirkadda, iyo sidoo kale fulinta dhammaan howlaha la xiriira curinta curiyaha iyaga loogu xayeysiinayo, iyo howlaha kale.
Hawlaha faraha badan, waxaan halkaan ku soo qaadaneynaa mid ka mid ah kuwa ugu fikirka badan ee naqshadayaasha naqshadeynta waana tan abuurista tirooyinka joomatari, laga yaabee inay tahay hab wanaagsan oo lagu bilaabo edbintan.
Tutorial loogu talagalay abuurista trochoid
Waxaan fureynaa Photoshop oo aan kusii soconaa samee sawir leh xuduudaha soo socda:
Wareeg: 800 / Dherer: 800
Habka midabka: RGB / 8 midab yar
Tusmada asalka: Caddaan
Waxaan sawireynaa goob ku saabsan 300 pixels sare, oo buluug ka buuxo oo aan raad lahayn. Lakabkaas (oo ay weheliso aaladda), waxaan ka beddeleynaa liiska xulashooyinka ee "hawlgallada baafinta" aaladda "lakabka cusub" illaa "Dhexgalka meelaha qaababka" ka dibna sawiri wareeg kale oo saami ah ilaa laga helayo natiijo la mid ah tan sawirkeenna.
Hadda waa inaan kala soocnaa lakabka, marka lagu daro, waxaan u beddelaynaa magaca "gabal" oo waxaan hoos ugu dhigi doonaa mugdiga 40%.
Waxa xiga waa in la abuuro ficil aan ku faahfaahin doonno trochoid taasna waxaan ku furi doonnaa guddi ficil waxaanan abuuri doonnaa koox ficil oo cusub, oo aan ugu yeeri doonno "trochoids".
Gudaha gudihiisa, waxaan ka abuurnay ficil la yiraahdo trochoid 1 oo waxaan u xilsaaraynaa furaha shaqada F12, kaas oo noo oggolaan doona inaan ku celino amarka la qabtay dhowr jeer si otomaatig ah.
Marka xigta, waxaan duubnaa amarka soo socda:
Nuqul ku samee lakabka badhanka midig ee dushiisa.
Waxaan dooranaa qalabka guuritaanka.
Waxaan gleynaa sawirka 'Adjustments / Hue / Saturation' (Ctrl + U) waxaanan u beddeleynaa midabka 9.
Waxaan galnaa tafatir / badal bilaash ah (CTRL + T) iyo xulashada qalabka xulashada waxaan ku badaleynaa qaabeynta wareega 9º.
Waxaan ku ansixineynaa isbeddelka Enter.
Waxaan riixnaa batoonka Jooji si aan u joojino duubista ficilka.
Hadda waxaad leedahay oo keliya adeegso ficil ahaan inta jeer ee loo baahdo si loo dhammeeyo wareegga, kiiskan wuxuu noqon doonaa 19 jeer, iyadoo loo baahan yahay in laga faa'iideysto toobiye aan u abuuri lahayn si aan uga dhigno F12.
cunt Tafatir / Beddel waxaan ka dhigi karnaa cabirka ku habboon dhadhankeenna. Waa lagama maarmaan in maskaxda lagu hayo in, tan awgeed, waa inaan hoos u dhignaa Shift si aan si qalad ah u beddelin saamiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sidee loo abuuraa trochoid iyada oo loo marayo Photoshop?
Sida si fudud loogu beddelo wajiga qofka Photoshop